I-Google ibhekisela ntoni xa iza kwi-backlink HQ?
Ngaphambi kokuzama ukujonga ngaphakathi kwe-HL backlinks kwindlela yokujonga injini ye-Google, makhe siqale ngeenkcazelo ezithile ezisisiseko. Yintoni i-backlink yeenjongo ze-SEO? I-backlink esemgangathweni ikhonkco ebuyisela kuwe kwiwebhusayithi yesithathu okanye iblogi. Ngamanye ama-backlink abizwa ngokuthi "ukungena" okanye "izixhumanisi ezingenayo". Noba yintoni.
Ngaba i-backlink ephezulu yeyona nto ibalulekile?
Kutheni i-backlink ikakhulukazi ye-HQ ibaluleke kakhulu kwinkqubela phambili kwi-SEO, kwaye ekugqibeleni - ukuzifumana phakathi kweziphumo eziphezulu zophando? I-backlink ephezulu yezinga eliphezulu eyakhiwe ngokwasemzimbeni ibonakala yiGoogle njengento "yokuvota" yokuzithemba nokuthembela kwiwebhusayithi yakho okanye ibhuloki ekhethekileyo kunye nexabiso langempela - corbata boda. Ngale ndlela, iGoogle ithatha zonke i-backlink kwiprofayili yakho yekhonkco - ukwabela iphepha ngalinye lewebhu kwixabiso ngalinye (elikwaziwa nangokuthi PageRank). Emva kokuba senze izinto zicacise kakuhle, makhe sibone oko iGoogle ibonakalayo-xa kuziwa kwi-backlinks ze-HQ ngokukodwa. Ngezantsi kukho iingqungquthela ezininzi ezixhaswe ngeenkcazelo ezimfutshane ukunika umfanekiso omkhulu.
Ngokubhekiselele kwizinto ezingasemgangathweni zemvelo eziphezulu, yiloo nto iGoogle ibheka ngokubanzi:
Ubalo besizinda somntu ngamnye ngokubhekiselele kwiwebhusayithi yakho okanye kwiblogi (yinto ebaluleke kakhulu kwi-Google's search ranking algorithm).
Igunya lephepha lewebhu okanye lewebhu, elidibanisa kwakhona kwiwebhusayithi yakho okanye iblogi nayo iphakathi kwezinto eziphambili ze-backlinks ze-HQ (oko kukuthi, unxibelelwano oluncinci kunye negunya elinamandla kakhulu lunokubetha lula nayiphi na isisombululo esisezantsi emgangathweni).
Umthombo wesigunyaziso emehlweni eGoogle yiwebhusayithi okanye iblogi ethembekileyo ngabasebenzisi bonke, iingcali zoshishino, ezinye iiwebhusayithi kunye neeblogi, kwakunye neenjini ezinkulu zokukhangela.
I-backlink ngaphezulu ze-HQ uye wakwazi ukwakha umzimba, ngcono.
iiwebhsayithi ezinokudala okanye iiblogi ngamanye amaxesha zibonwa zixabiseke ngakumbi, kunokuba zibuyiselwe kwi-backlinks ukusuka kwimithombo engapheliyo.
Unxibelelwano oluvela kwimithombo echaphazelekayo kuphela kunye nezoshishino luya kuba nobunzima obunokulinganisela ngakumbi kunye nokuxabisa kwi-SEO, kunokuba abo bangenalo iimeko ezichaphazelekayo (yintoni enye - i-backlinks engabalulekiyo ingaphathwa ngokulula yiGoogle njengento ekhohlakeleyo okanye isenzo esicacisayo - oko ngokwemvelo sisebenza kwisigwebo sokubeka okanye ukukhulelwa komyalelo).
I-backlinks yomxholo (okokuthi, abo bafunyenwe ngaphakathi kwiwey content content page) baxabiseke kakhulu, kunokuba bafakwe kwiiplagi ezihlukeneyo, amajegethi, okanye kwenye indawo evela kwimiyalezo ebalulekileyo yomzimba.
Ukudibanisa iiprofayili ezahlukeneyo kuya kwenza okulungileyo, njengoko unamaqela amaninzi ahlukeneyo e-HQ ezivela kwiindawo ezahlukeneyo zewebhu kunye neziblogi zikhangeleka ngokwemvelo (oko kukuthi, azikho izixhumanisi ezininzi ezivela kwisizinda esisodwa - ezinokubonakala ngathi ugaxekile iinjini zokukhangela).
Ukunxibelelana kweekhonkco zokubhaliweyo akufanele nanini ukunyanzeliswa kunye-bahlule ukukhetha indlela iGoogle "efunde ngayo" kwaye "iyaqonda" isixhumanisi (kuze kube ngolu hlobo, ndincoma ukunakekelwa ngokukodwa ngamashishini angundoqo angamagama angundoqo, cinga nje kabini ngaphambi kokufaka iifayile ezifanayo zetekisi mhlawumbi sele zisetyenziswe ngabaqhubi bakho be-niche).